သရဲနီဝိဉာဉျတှေ တကြော့ပွနျနိုးထဖို့ ဆိုးလျရှားတာဝနျကနြေိုငျမှာလား – Sports A2Z
ဒီနညေ့ မွနျမာစံတျောခြိနျ ၁ နာရီခှဲမှာ ယူရိုပါလိဂျဗိုလျလုပှဲစဉျအဖွဈ ပိုလနျနိုငျငံ၊ ဂဒနျ့ဈမွို့မှာ ယှဉျပွိုငျကစားကွမယျ့ ယူနိုကျတကျအသငျးနဲ့ ဗီလာရီးရဲလျတို့ရဲ့ပှဲစဉျ ယူနိုကျတကျနညျးပွဆိုးလျရှားအနနနေဲ့ ပွီးခဲ့တဲ့နှဈက ယူရိုပါလိဂျအမာရှတျဟောငျးကို ကုသပွီး သရဲနီဝိဉာဉျဟောငျးတှကေို တကြော့ပွနျ ရှငျပွနျထမွောကျစမေလားဆိုတာ အတျောလေး စိတျဝငျစားဖို့ကောငျးနပေါတယျ။
ယူနိုကျတကျနညျးပွဆိုးလျရှားအတှကျ နညျးပွဘဝ ပထမဆုံးအောငျမွငျမှုအတှကျ ဒီနညေ့ ယူရိုပါလိဂျဗိုလျဝငျခံဖို့က တိုကျပှဲသဈတခုဖွဈသလို ဗီလာရီးရဲလျအသငျးအတှကျလညျး ဥရောပပွိုငျပှဲဗိုလျလုပှဲဆီကို ပို့ဆောငျပေးခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးနညျးပွဖွဈလာတဲ့ အူနိုငျး အမျမရီကလညျး အခှငျ့ကောငျးကို လကျလှတျမခံဘဲ နှဈနှဈကာကာ အားစိုကျလာဖို့ ရှိနတေယျ။
မေ ၂၆ ရကျရဲ့ တိုကျဆိုငျမှု
၉၉ ခုနှဈဆီက ယူနိုကျတကျအသငျး ဖလား ၃ လုံးခနျြပီယံဖွဈခဲ့တဲ့ ခနျြပီယံလိဂျဖိုငျနယျရှရေောငျညမှာ ဆိုးလျရှားဟာ ဘိုငျယနျမွူးနဈကို သှငျးယူခဲ့တဲ့ အဖိုးတနျဂိုးဟာ ဒီနလေို့ မေ ၂၆ ရကျနမှေ့ာ ယူနိုကျတကျရဲ့ အောငျပှဲခံရာဖွဈခဲ့ပွီး အခု တူညီတဲ့တရကျတညျးမှာပဲ ကစားရမယျ့ ယူရိုပါလိဂျဖိုငျနယျရဲ့တိုကျဆိုငျမှု သူဘယျလောကျမှျောဝငျလာမလဲ စောငျ့ကွညျ့ရမှာ သခြောပေါကျပါ။
ဆာအဲလကျဈရဲ့ လိုကျပါလာမှုက ယူနိုကျတကျကို ဘယျလိုအားတကျစမှောလဲ?
ယူနိုကျတကျရဲ့ပဲ့ကိုငျရှငျကွီး ဆာအဲလကျဈ ဖာဂူဆနျဟာ ဂဒနျ့ဈခရီးစဉျကို အသငျးနဲ့အတူ လိုကျပါလာခဲ့တာဖွဈပွီး သူ့ရဲ့ပါဝငျမှုဟာ ယူနိုကျတကျတသငျးလုံးကို တကျကွှစတေယျလို့ ဆိုးလျးရှားနဲ့ ဖာနနျဒကျဈတို့က ထုတျပွောခဲ့ကွပွီး နညျးပွကွီးရဲ့ အတှအေ့ကွုံတှကေ ဒီနပှေဲ့မှာ တသငျးလုံးအတှကျ ‘အား’ တခုဖွဈလာစမေယျလို့ အခိုငျအမာ ယုံကွညျနကွေတာပါ။
အဝါရောငျရငေုပျသဘျောကို သာလှနျအငျအားနဲ့ ရကျစကျစှာ ခမြှေုနျးသှားမလား?
ယူနိုကျတကျရဲ့လူအငျအားတောငျ့တငျးမှုနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျမှာ အဆငျ့ ၂ ဆိုတဲ့ အရှိနျအဝါက လာလီဂါမှာ ဇယားအလယျနားရပျတညျခဲ့ရတဲ့ ဗီလာရီးရဲလျထကျ အဘကျဘကျက သာလှနျနပွေီး နိုငျလိုစိတျပွငျးပွမှုက ဒီပှဲရဲ့ အဖွဖွေဈလာမှာပါ။ ယူနိုကျတကျက အဆိပျပွငျးပါတယျဆိုတဲ့ ဗီလာရီးရဲလျကို သာလှနျအငျအားနဲ့ ရကျစကျစှာ ခမြှေုနျးသှားမလားဆိုတာဟာ အမျမရီအတှကျ စိနျချေါမှုတခုဖွဈလာမှာပါ။
ဆရာဟောငျးအမျမရီအကွောငျး နောကနြေတေဲ့ မာတာ ဘယျလိုသတိပေးထားလဲ?
ဗလငျစီယာမှာ နညျးပွအမျမရီနဲ့ အလုပျတှဲလုပျခဲ့တဲ့ ဟှမျမာတာက ဗီလာရီးရဲလျအသငျးက စပိနျသားတှအေကွာငျး အတှငျးသိအဆငျးသိရှိထားသလို ဆီဗီလားနဲ့ ယူရိုပါလိဂျ ၃ ထပျကှမျးခနျြပီယံဖွဈထားတဲ့ အမျမရီလိုနညျးပွဆီက နညျးဗြူဟာပိုငျးအရ ” ထငျမှတျမထားတဲ့ စပရိုကျတိုကျမှု ” ကို မြှျောလငျ့ထားသငျ့ပွီး ကွိုပွငျဆငျထားသငျ့ကွောငျး ယူနိုကျတကျကို သတိပေးသှားခဲ့သလို ဒီနညျးပွဟာ စနဈတကနြဲ့ အကှကျခပြွီး လုပျဆောငျသှားမယျ့သူလို့ အတပျပွောထားခဲ့တယျ။
ဒီနညေ့ ယူရိုပါလိဂျဗိုလျလုပှဲမှာ ယူနိုကျတကျအသငျးက ၂ ဂိုး ၁ ဂိုးနဲ့ ကပျအနိုငျရသှားမယျလို့ မိုကျကယျ အိုဝငျရဲ့ ခနျ့မှနျးခကျြက ရှိလာခဲ့ပွီး ယူနိုကျတကျအသငျးကသာ ဒီဖလားကို သိမျးပိုကျဖို့ ရပေနျးအစားဆုံးအသငျးဖွဈတယျလို့ သုံးသပျသှားခဲ့တယျ။
ဒါ့အပွငျ ဗီလာရီးရဲလျကို ကောငျးကောငျးဒုက်ခပေးဖို့ သူတို့ကို ဘောလုံးပေးကိုငျထားပွီး ယူနိုကျတကျရဲ့အပိုငျနိုငျဆုံးအားသာခကျြဖွဈတဲ့ ကောငျတာကစားပုံနဲ့ အလဲထိုးသငျ့ကွောငျး ဆှေးနှေးသှားခဲ့တယျ။
ယူနိုကျတကျ ဒဏျရာရနဲ့ ပှဲပယျလူစာရငျး
ခွကေငျြးဝတျအရှတျစုတျပွဲဒဏျရာရထားတဲ့ အသငျးခေါငျးဆောငျဟာရီ မကျဂှိုငျးယားဟာ တရာသီလုံး ကစားလာပွီးမှ ဒီနညေ့ကို လှဲခြျောဖို့ ရှိနပွေီး ဂဒနျ့ဈခရီးစဉျကို လိုကျပါလာခဲ့ပမေယျ့ ယူနိုကျတကျရဲ့ နောကျဆုံးလကေ့ငျြ့ရေးအစီအစဉျမှာ မပူးပေါငျးနိုငျခဲ့ကွောငျ့လို့ သိရပါတယျ။
ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ ဝှကျဖဲတှကေို သိမျးထားခငျြးသေးတဲ့ ဆိုးလျရှားရဲ့ရညျရှယျခကျြကွောငျ့ ဆကျလကျစောငျ့ကွညျ့ရဦးမှာဖွဈပွီး မာစီယယျလျက သခြောပေါကျလှဲခြျောမယျမှာဖွဈသလို ဖရကျဒျက ဒဏျရာအနညျးငယျရှိနလေို့ ဝငျကစားဖို့ မရရောသေးတဲ့ အခွအေနပေါ။
ယူနိုကျတကျ ခနျ့မှနျး Line-up
ဂိုးသမားနရောမှာ ဒဟဲယားကို နရောပေးသှားဖို့ ပွငျဆငျနတေဲ့ ဆိုးလျရှားဟာ မကျဂှိုငျးယားနရောမှာ တှမျဇီဘီကို ပှဲထှကျစမှောဖွဈသလို လုချရှော၊ ဝနျဘဈဆာကာနဲ့ လနျဒလော့ဖျတို့က ခံစဈအထိုငျအဖွဈ ခငျးကငျြးလာဖှယျ ရှိနပေါတယျ။
ကှငျးလယျအထိုငျမှာမှာ ဖရကျဒျ+မကျတျောမီနေးအတှဲကို ရညျရှယျထားတယျလို့ သိရပွီး ကှငျးလယျတိုကျစဈမှာတော့ ညာခွမျးမှာ ရကျရျှဖို့ဒျ၊ ဘယျခွမျးမှာ ပေါ့ဘာနဲ့အတူ ဘရူနိုက ကစားကှကျဖနျတီးရှငျအဖွဈ၊ တိုကျစဈမှူးနရောမှာ ကမ်ဘာ့အဆငျ့ သမ်ဘာ့ရငျ့ကာဗာနီတို့က အသငျးကို ရှတေ့နျးက ဦးဆောငျလာဖို့ ရှိနတေယျ။ ဂရငျးဝုဒျ၊ အာမကျ ဂယျြလို၊ မာတာ၊ ဗနျဒဘိချ၊ မာတဈချြ၊ တဲလကျဈတို့ အုပျစုကတော့ အရနျခုံကနေ စောငျ့ကွညျ့ရဖို့ ရှိနတေယျ။
ဗီလာရီးရဲလျ ခနျ့မှနျး Line-up
အမျမရီရဲ့အမွငျအရ ၄-၄-၂ ကိုပဲ ရှေးခယျြလာဖှယျရှိနတေယျ။ ခနျ့မှနျးမှုတှအေရ ဂိုးဆာဂြီယို အာဆနျဟို၊ ဗဟိုခံစဈ ပေါလျတောရကျဈ+အယျလျဘီယောလျ၊ ဘယျညာနောကျခံအတှဲ မာရီယို ဂတျစပါ+ ပကျဒရာဇာ၊ ကှငျးလယျခံစဈလူအဖွဈ ကာပူယေး၊ ကှငျးလယျဗဟိုမှာ ထရီဂှယျရို့ဈ၊ တောငျပံတိုကျစဈတစုံမှာ ပါရဲဟို+ပီနို တို့နဲ့အတူ တိုကျစဈမှာ မိုရီနိုနဲ့ အယျလျကာဆာတို့က ဦးဆောငျလာဖို့ ရှိနပေါတယျ။
ဒီနေ့ည မြန်မာစံတော်ချိန် ၁ နာရီခွဲမှာ ယူရိုပါလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲစဉ်အဖြစ် ပိုလန်နိုင်ငံ၊ ဂဒန့်စ်မြို့မှာ ယှဉ်ပြိုင်ကစားကြမယ့် ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ ဗီလာရီးရဲလ်တို့ရဲ့ပွဲစဉ် ယူနိုက်တက်နည်းပြဆိုးလ်ရှားအနနေနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ယူရိုပါလိဂ်အမာရွတ်ဟောင်းကို ကုသပြီး သရဲနီဝိဉာဉ်ဟောင်းတွေကို တကျော့ပြန် ရှင်ပြန်ထမြောက်စေမလားဆိုတာ အတော်လေး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ်။
ယူနိုက်တက်နည်းပြဆိုးလ်ရှားအတွက် နည်းပြဘဝ ပထမဆုံးအောင်မြင်မှုအတွက် ဒီနေ့ည ယူရိုပါလိဂ်ဗိုလ်ဝင်ခံဖို့က တိုက်ပွဲသစ်တခုဖြစ်သလို ဗီလာရီးရဲလ်အသင်းအတွက်လည်း ဥရောပပြိုင်ပွဲဗိုလ်လုပွဲဆီကို ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးနည်းပြဖြစ်လာတဲ့ အူနိုင်း အမ်မရီကလည်း အခွင့်ကောင်းကို လက်လွှတ်မခံဘဲ နှစ်နှစ်ကာကာ အားစိုက်လာဖို့ ရှိနေတယ်။
မေ ၂၆ ရက်ရဲ့ တိုက်ဆိုင်မှု
၉၉ ခုနှစ်ဆီက ယူနိုက်တက်အသင်း ဖလား ၃ လုံးချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ဖိုင်နယ်ရွှေရောင်ညမှာ ဆိုးလ်ရှားဟာ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ကို သွင်းယူခဲ့တဲ့ အဖိုးတန်ဂိုးဟာ ဒီနေ့လို မေ ၂၆ ရက်နေ့မှာ ယူနိုက်တက်ရဲ့ အောင်ပွဲခံရာဖြစ်ခဲ့ပြီး အခု တူညီတဲ့တရက်တည်းမှာပဲ ကစားရမယ့် ယူရိုပါလိဂ်ဖိုင်နယ်ရဲ့တိုက်ဆိုင်မှု သူဘယ်လောက်မှော်ဝင်လာမလဲ စောင့်ကြည့်ရမှာ သေချာပေါက်ပါ။
ဆာအဲလက်စ်ရဲ့ လိုက်ပါလာမှုက ယူနိုက်တက်ကို ဘယ်လိုအားတက်စေမှာလဲ?
ယူနိုက်တက်ရဲ့ပဲ့ကိုင်ရှင်ကြီး ဆာအဲလက်စ် ဖာဂူဆန်ဟာ ဂဒန့်စ်ခရီးစဉ်ကို အသင်းနဲ့အတူ လိုက်ပါလာခဲ့တာဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ပါဝင်မှုဟာ ယူနိုက်တက်တသင်းလုံးကို တက်ကြွစေတယ်လို့ ဆိုးလ်းရှားနဲ့ ဖာနန်ဒက်စ်တို့က ထုတ်ပြောခဲ့ကြပြီး နည်းပြကြီးရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေက ဒီနေ့ပွဲမှာ တသင်းလုံးအတွက် ‘အား’ တခုဖြစ်လာစေမယ်လို့ အခိုင်အမာ ယုံကြည်နေကြတာပါ။
အဝါရောင်ရေငုပ်သဘော်ကို သာလွန်အင်အားနဲ့ ရက်စက်စွာ ချေမှုန်းသွားမလား?
ယူနိုက်တက်ရဲ့လူအင်အားတောင့်တင်းမှုနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ အဆင့် ၂ ဆိုတဲ့ အရှိန်အဝါက လာလီဂါမှာ ဇယားအလယ်နားရပ်တည်ခဲ့ရတဲ့ ဗီလာရီးရဲလ်ထက် အဘက်ဘက်က သာလွန်နေပြီး နိုင်လိုစိတ်ပြင်းပြမှုက ဒီပွဲရဲ့ အဖြေဖြစ်လာမှာပါ။ ယူနိုက်တက်က အဆိပ်ပြင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ ဗီလာရီးရဲလ်ကို သာလွန်အင်အားနဲ့ ရက်စက်စွာ ချေမှုန်းသွားမလားဆိုတာဟာ အမ်မရီအတွက် စိန်ခေါ်မှုတခုဖြစ်လာမှာပါ။
ဆရာဟောင်းအမ်မရီအကြောင်း နောကျေနေတဲ့ မာတာ ဘယ်လိုသတိပေးထားလဲ?
ဗလင်စီယာမှာ နည်းပြအမ်မရီနဲ့ အလုပ်တွဲလုပ်ခဲ့တဲ့ ဟွမ်မာတာက ဗီလာရီးရဲလ်အသင်းက စပိန်သားတွေအကြာင်း အတွင်းသိအဆင်းသိရှိထားသလို ဆီဗီလားနဲ့ ယူရိုပါလိဂ် ၃ ထပ်ကွမ်းချန်ပီယံဖြစ်ထားတဲ့ အမ်မရီလိုနည်းပြဆီက နည်းဗျူဟာပိုင်းအရ ” ထင်မှတ်မထားတဲ့ စပရိုက်တိုက်မှု ” ကို မျှော်လင့်ထားသင့်ပြီး ကြိုပြင်ဆင်ထားသင့်ကြောင်း ယူနိုက်တက်ကို သတိပေးသွားခဲ့သလို ဒီနည်းပြဟာ စနစ်တကျနဲ့ အကွက်ချပြီး လုပ်ဆောင်သွားမယ့်သူလို့ အတပ်ပြောထားခဲ့တယ်။
ဒီနေ့ည ယူရိုပါလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲမှာ ယူနိုက်တက်အသင်းက ၂ ဂိုး ၁ ဂိုးနဲ့ ကပ်အနိုင်ရသွားမယ်လို့ မိုက်ကယ် အိုဝင်ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်က ရှိလာခဲ့ပြီး ယူနိုက်တက်အသင်းကသာ ဒီဖလားကို သိမ်းပိုက်ဖို့ ရေပန်းအစားဆုံးအသင်းဖြစ်တယ်လို့ သုံးသပ်သွားခဲ့တယ်။
ဒါ့အပြင် ဗီလာရီးရဲလ်ကို ကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးဖို့ သူတို့ကို ဘောလုံးပေးကိုင်ထားပြီး ယူနိုက်တက်ရဲ့အပိုင်နိုင်ဆုံးအားသာချက်ဖြစ်တဲ့ ကောင်တာကစားပုံနဲ့ အလဲထိုးသင့်ကြောင်း ဆွေးနွေးသွားခဲ့တယ်။
ယူနိုက်တက် ဒဏ်ရာရနဲ့ ပွဲပယ်လူစာရင်း
ခြေကျင်းဝတ်အရွတ်စုတ်ပြဲဒဏ်ရာရထားတဲ့ အသင်းခေါင်းဆောင်ဟာရီ မက်ဂွိုင်းယားဟာ တရာသီလုံး ကစားလာပြီးမှ ဒီနေ့ညကို လွဲချော်ဖို့ ရှိနေပြီး ဂဒန့်စ်ခရီးစဉ်ကို လိုက်ပါလာခဲ့ပေမယ့် ယူနိုက်တက်ရဲ့ နောက်ဆုံးလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်မှာ မပူးပေါင်းနိုင်ခဲ့ကြောင့်လို့ သိရပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဝှက်ဖဲတွေကို သိမ်းထားချင်းသေးတဲ့ ဆိုးလ်ရှားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့် ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရဦးမှာဖြစ်ပြီး မာစီယယ်လ်က သေချာပေါက်လွဲချော်မယ်မှာဖြစ်သလို ဖရက်ဒ်က ဒဏ်ရာအနည်းငယ်ရှိနေလို့ ဝင်ကစားဖို့ မရေရာသေးတဲ့ အခြေအနေပါ။
ယူနိုက်တက် ခန့်မှန်း Line-up
ဂိုးသမားနေရာမှာ ဒဟဲယားကို နေရာပေးသွားဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ ဆိုးလ်ရှားဟာ မက်ဂွိုင်းယားနေရာမှာ တွမ်ဇီဘီကို ပွဲထွက်စေမှာဖြစ်သလို လုခ်ရှော၊ ဝန်ဘစ်ဆာကာနဲ့ လန်ဒလော့ဖ်တို့က ခံစစ်အထိုင်အဖြစ် ခင်းကျင်းလာဖွယ် ရှိနေပါတယ်။
ကွင်းလယ်အထိုင်မှာမှာ ဖရက်ဒ်+မက်တော်မီနေးအတွဲကို ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ သိရပြီး ကွင်းလယ်တိုက်စစ်မှာတော့ ညာခြမ်းမှာ ရက်ရ်ှဖို့ဒ်၊ ဘယ်ခြမ်းမှာ ပေါ့ဘာနဲ့အတူ ဘရူနိုက ကစားကွက်ဖန်တီးရှင်အဖြစ်၊ တိုက်စစ်မှူးနေရာမှာ ကမ္ဘာ့အဆင့် သမ္ဘာ့ရင့်ကာဗာနီတို့က အသင်းကို ရှေ့တန်းက ဦးဆောင်လာဖို့ ရှိနေတယ်။ ဂရင်းဝုဒ်၊ အာမက် ဂျယ်လို၊ မာတာ၊ ဗန်ဒဘိခ်၊ မာတစ်ခ်ျ၊ တဲလက်စ်တို့ အုပ်စုကတော့ အရန်ခုံကနေ စောင့်ကြည့်ရဖို့ ရှိနေတယ်။
ဗီလာရီးရဲလ် ခန့်မှန်း Line-up
အမ်မရီရဲ့အမြင်အရ ၄-၄-၂ ကိုပဲ ရွေးချယ်လာဖွယ်ရှိနေတယ်။ ခန့်မှန်းမှုတွေအရ ဂိုးဆာဂျီယို အာဆန်ဟို၊ ဗဟိုခံစစ် ပေါလ်တောရက်စ်+အယ်လ်ဘီယောလ်၊ ဘယ်ညာနောက်ခံအတွဲ မာရီယို ဂတ်စပါ+ ပက်ဒရာဇာ၊ ကွင်းလယ်ခံစစ်လူအဖြစ် ကာပူယေး၊ ကွင်းလယ်ဗဟိုမှာ ထရီဂွယ်ရို့စ်၊ တောင်ပံတိုက်စစ်တစုံမှာ ပါရဲဟို+ပီနို တို့နဲ့အတူ တိုက်စစ်မှာ မိုရီနိုနဲ့ အယ်လ်ကာဆာတို့က ဦးဆောင်လာဖို့ ရှိနေပါတယ်။